क्रेडिट कार्ड र ऋण सिक्न | USAHello | USAHello
तपाईं पैसा उधारो गर्नुपर्छ? दुवै ऋण र क्रेडिट मतलब पैसा उधारो. ऋणबाट केही प्रकार अरूलाई भन्दा सुरक्षित छन्. क्रेडिट कार्ड सिक्न र दिन ऋण र पैसा उधारो उत्तम तरिका तिर्न.
यसको सट्टा तपाईंले नगद प्रयोग को कुरा को लागि भुक्तानी गर्न क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. को दोकान मा भुक्तानी गर्न, तपाईं मिसिन मा एउटा सानो प्लास्टिक कार्ड राख्न सक्छ. फोन वा अनलाइन भन्दा, तपाईं कार्ड नम्बर र पासवर्ड वा Ntgahma प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ.
-गर्न-सजिलो प्रयोग र सुरक्षित किनमेल र बिल भुक्तानी क्रेडिट कार्ड. तर जहाँ जोखिम. प्रत्येक महिना आफ्नो क्रेडिट कार्ड भुक्तान भने, रुचि भुक्तानी गर्नेछ. ब्याज के तपाईं उधारो रकम भन्दा तिर्न मात्रा हो. गैर-भुक्तानी को अब को अवधि, वृद्धि चासो द्वारा ऋण लिइएको. अमेरिका मा मान्छे को एक धेरै किनभने क्रेडिट कार्ड को ठूलो ऋण छ.
किनभने ऋण मा रही जोखिम को एक क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ सक्छ. तर यो अर्को कारण लागि उपयोगी हुन सक्छ: तपाईंको क्रेडिट इतिहास सुरु गर्न. तपाईंको क्रेडिट रेकर्ड यसलाई उधारो के को आफ्नो रेकर्ड छ र फेरि कसरी भुक्तानी. यो राम्रो क्रेडिट भवन मा क्रेडिट इतिहास मद्दत गर्छ. तपाईं एक शेष निर्माण भने, तपाईंले एक कार वा घर खरीद जस्तै ठूलो कुरा किन्न आवश्यक जब पैसा उधारो गर्न सक्छन्.
त्यसैले तपाईंको क्रेडिट इतिहास निर्माण गर्न क्रेडिट कार्ड आवश्यक. तर तपाईंले पहिले नै राम्रो सन्तुलन छ भने मात्र क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरु तपाईं एक क्रेडिट कार्ड दिन छैन!
तर कसरी म सिर्जना गर्न क्रेडिट कार्ड बिना इतिहास क्रेडिट गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईं एक क्रेडिट कार्ड सुरक्षित सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. प्रगति पैरबाँसा क्रेडिट कार्ड आप्रवासी र अन्य क्रेडिट निर्माण गर्न संघर्ष भएकाहरू प्रत्याभूति गर्दै. तिमी उसलाई पैसा पहिले नै दिन सक्छ किनभने असुरक्षित क्रेडिट कार्ड छैन साँच्चै क्रेडिट छन्, वा भुक्तानी गर्न कसैले प्रतिज्ञा गरेका छन्. तर यो तपाईं राम्रो सन्तुलन निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ. बैंक र क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरु पनि क्रेडिट कार्ड मिल्यो. पैरबाँसा कम ब्याज दर र सजिलो कम्पनीहरु को अन्य मूल्यभन्दा लागू छ. त्यसैले क्रेडिट यूनियन के.
क्रेडिट संघ सामेल
क्रेडिट यूनियन बैंकहरू जस्तै हो, तर तिनीहरूले मानिसहरूलाई सफल मदत गर्न खोज्नुभएको. सबै खाता को मालिक सँगै क्रेडिट संघ छ. यो कुनै क्रेडिट इतिहास भएका कम आय मान्छे र मान्छे पैसा उधारो वा प्रदान क्रेडिट कार्ड द्वारा क्रेडिट यूनियन मद्दत गर्छ. यो तपाईं पनि पैसा बचत गर्न सहयोग गर्नेछ.
तपाईं नजिकै एक क्रेडिट संघ फेला
Payday ऋण पैसा आवश्यक छ छिटो गर्ने मान्छे को लागि हो. मान्छे मा तपाईं भुक्तानी प्राप्त दिन यो भुक्तानी गर्न एक ऋणदाता पैसा उधारो. तर payday ऋण अक्सर सुरु भन्दा बढी गम्भीर आर्थिक समस्या निम्त्याउन. एक payday ऋण तपाईं के निम्न तलब अप जाँच गर्न कम पैसा छ भन्ने हो प्राप्त. साथै, उधारदाताओं ध्यान धेरै चार्ज PayDay. त्यसैले तपाईं यसलाई borrows भन्दा धेरै तिर्न. समय भुक्तानी भने, तपाईंले थप ब्याज भुक्तानी गर्न हुनेछ.
Payday वैकल्पिक ऋण (पाल)
यो क्रेडिट यूनियन आपतकालीन payday ऋण को लागि एक राम्रो विकल्प दिन सक्छ: वैकल्पिक PayDay ऋण (पाल). पाल एक अल्पकालीन ऋण छ, त्यसैले तपाईं एक payday ऋण प्राप्त छैन. तपाईं सम्म उधारो गर्न सक्छन् 1000 USD चासो धेरै आयातित के छैन. तपाईं उत्पादन पाल अघि तपाईंले एक महिनाको लागि क्रेडिट संघ को एक सदस्य हुनुपर्छ.
अचल सम्पत्ति ऋण
बंधक मान्छे एक घर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ ऋण हो. त्यहाँ एउटा ठूलो बढावा प्रत्येक महिना छ. तर कहिले काँही यो भाडामा तिर्न भन्दा अधिक छ, र अन्त मा, तपाईं आफ्नो घर स्वामित्व हुनेछ! बंधक प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ. तर आफ्नो संघ क्रेडिट तपाईंलाई मदत गर्न सक्छ.
गैर-अमेरिकी नागरिक को लागि बंधक पढ्न
, शरणार्थी र प्रवासिहरु आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका भरि धेरै कार्यक्रम मदत. यस्तो व्यवसाय परामर्श, कार्यशालाओं, वित्तीय रूपमा ऋण र सहयोग को अन्य प्रकारका प्रदान. यहाँ तिनीहरूलाई केही छन्:
साक्रामेन्टो, क्यालिफोर्निया: दरवाजे खोल्दै
नयाँ हैम्पशायर: नयाँ ह्यामिल्टन नयाँ फंड ऋण
न्यूयोर्क शहर: नयाँ अमेरिकी केन्द्र को काम
वाशिंगटन, डीसी, बाल्टीमोर: आर्थिक विकास ल्याटिन लागि केन्द्र
अटलान्टा, Georgia: उदय वित्तीय केन्द्र मा
सामुदायिक विकास को लागि वित्तीय संस्थाहरू (CDFIs) क्रेडिट यूनियन समान. तिनीहरूले सेवाहरूबाट एक लाभ बनाउन चाहँदैनन्. बरु, तिनीहरूले मानिसहरूलाई सफल मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ. प्रारम्भिक ऋण संस्थाहरू सानो व्यवसाय, नयाँ व्यापार पैसा उधारो, र घरहरू उपयुक्त मूल्यहरु निर्माण
तपाईं नजिकै CDFI खोज्न
पैसा बचत गर्न बजेट